कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ,यो दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले चाहेको फल पाउने विश्वास ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ,यो दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले चाहेको फल पाउने विश्वास ! जानी राखौ
Published :4March, 2020 4:35 pm
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्।‘बुध’ ग्र हको लागि समर्पित बार नै बुधबार हो। यस दिन विशेष गरी विथाल-देव (कृष्णको अवतार)को पुजा गरिन्छ। पुजा गर्दा तुलसीको पातले गर्नुपर्दछ। कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ मानिन्छ। साथै यस दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले आफूले चाहेको फल पाउने विश्वास गरिन्छ।
यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी फल दिन्छ। बुधबार के गर्दा जिन्दगी समृद्ध हुन्छ, जान्नुहोस्:– बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा क ष्ट निवारण हुन्छ।– जसको कुण्डलीमा बुध ग्र हको दो ष छ खासगरी बुधबार गणेशलाई लड्डु चढाउनु फलदायी मानिन्छ।– हिन्दु धर्ममा गाईलाई पूजनीय मानिन्छ। विशेषगरी बुधबार गाईलाई हरियो घाँस दिने व्यक्तिलाई सबै देवी-देवताको कृ पा हुने गर्छ।-बुधबार गणेश भगवानलाई सिन्दुर चढाउँदा मनले चिताएको पुग्ने विभिन्न् धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाईन्छ ।